SSL na SEO: ha abụọ nwere okwu?
Ka anyị malite site n'icheta ụfọdụ n'ime nyocha gị ugbu a, ileghara ihe ị na-achọ anya, ma ịchọta ndị iro gị ma ọ bụ ịchọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na Weebụ. Eleghi anya ị ga-eleta ma weebụsaịtị HTTP na HTTPS. Mana olee ihe dị iche n'etiti ha, karịsịa site n'echiche nke SSL na SEO? N'iburu n'uche mmetụta ha nwere na e-azụmahịa na ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ọ bụla, ka anyị hụ otú SSL na SEO si eme n'eziokwu.
Ndi SSL na SEO bara uru mgbe ha na-emekọ ihe ọnụ?
Ka anyị malite site na nzụlite ntanetị ma hụ otú SSL si arụ ọrụ. N'ịbụ akụkụ nke Nchekwa Ihe Nchekwa Hypertext Transport, ọ na-eji igodo 2048-bit iji chebe ahụmahụ onye ọrụ site na usoro nchekwa nke nyocha, nkwenye, na izo ya ezo n'etiti sava weebụ na ihe nchọgharị Ịntanetị n'onwe ya. O doro anya na nchekwa SSL na-abata n'ahịrị atọ:
Ọrụ ezoro ezo maka ịhụ na omume onye ọrụ ugbu a bụ ihe a na-apụghị ịchọpụta, n'ihi ya, ọ bụghị ndị scammers
iguzogide mwakpo hacker mgbe ị na - ewulite ikwesị ntụkwasị obi siri ike n'etiti ndị ọrụ
Iguzosi ike data ga - egbochi faịlụ ọ bụla site na nrụrụ aka ma ọ bụ mgbanwe a na - enweghị ikike n'oge a gbanwere
Ma ka anyi mechaa laghachi na isi - gini bu njikọ di n'etiti SSL na SEO? Ma ọ bụ, olee otú nche na-esi na-ebute ogo weebụ gị na Ngosi peeji nke Search Engine? Dị ka ihe ọma ọ bụla na-eweta mmetụta dị mma n'ebe ogo gị dị, yana ọnụọgụ okporo ụzọ na mbuba onwe ya. Ekwuru m na nchedo weebụ gị nwekwara mmetụta dị kpọmkwem na nchọta algorithm nke Google mgbe ị na-ekpebi inye gị ọkwa dị elu. N'okpuru ebe a ka anyị tụlee njikọ dị n'etiti SSL na SEO na ntụziaka atọ dị iche iche - ọkwa, okporo ụzọ, na ịtụgharị:
Dịka ama kwuru, ebe nrụọrụ weebụ gị dị ugbu a karịa ịdabere na nchekwa SSL karịa mgbe ọ bụla. N'ileghachi anya azụ na 2014-2015 mgbe Google nyere mbụ algọridim iji kwado saịtị weebụ HTTPS, nchekwa SSL na-abụ ihe dịka algorithm ọkụ maka ime mkpebi ikpeazụ. Ma, taa, dị ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmenti si kwuo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke nsonaazụ ọchụchọ nke Google na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ dabere na HTTPS na SSL akwụkwọ. Ọzọkwa, ọ dịka ihe dịka pasent 1 nke ihe ọ bụla n'Ịntanet n'Ịntanet. Ya mere, gịnị ma ọ bụrụ na ị gaghị eji SSL na SEO kwalite asọmpi ahụ, ozugbo na ruo mgbe ebighị ebi?
N'ileba anya inweta uru okporo ụzọ, ọkwa kachasị elu na-enyekarị okporo ụzọ okporo ụzọ, ọ bụ naanị n'ihi na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eleta ebe nrụọrụ weebụ gị, ndị na-ege ntị n'ozuzu ị ga-etinye aka. Ọzọkwa, nchekwa weebụ dịnụ na-enye onye ọ bụla nwere ike ịzụta na Ịntanetị ihe mgbaàmà dị ike na ikike na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ nwere ike ịwụsa ihe ọ bụla na-enweghị nchebe ma pịa na nsonaazụ ọchụchọ na-akwọga ha na ibe weebụ gị, n'aka nke na-enye mmelite na ọnụọgụ nke CTR gị.
E kwuwerị, SSL na SEO nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ iji mee ka mgbanwe gị dị ukwuu. M na-ekwu na ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike ịghọ ndị dị adị n'ezie, ozugbo ha gara na ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọma nwere ikikere a tụkwasịrị obi. Naanị cheta na dịka nyocha ndị na-eduzi, ihe karịrị pasent 80 nke ndị ahịa na-azụghị akwụkwọ ga-ajụ nkwa ha ịzụta, nanị n'ịchọpụta na ihe ndekọ ha onwe ha zuru ezu na-abịa site na njikọ na-enweghị nchebe Source .